जुम्ल्याहा बच्चाको उद्दार गरे डा.किशोर खत्रीले #Covid19 • Health News Nepal
दाङ २८, बैशाख
तुलसीपुरमा क्वारेन्टिनमा बसेकी एक महिलाले जुम्ल्याहा छोरी जन्माएकी छन्।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले क्वारेन्टाइनमा राखेकी महिलाले जन्माएका जुम्ल्याहा वच्चाहरुको अवस्था जटिल भएपछि उनीहरुको थप उपचारका लागि तुलसी अस्पतालमा आइसियूमा राखेर उपचार भइराखेको अस्पतालका सञ्चालक बालरोग विशेषज्ञ डा. किशोर खत्रीले जानकारी दिएका छन ।
“स्वस्थ जन्मिए पनि उनीहरुको तौल कम छ त्यसकारण एनआइसियुमा राखेर उपचार गरिरहेका छौ” डा.खत्रीले भने ।
वच्चाको जन्म तौल २५ सय ग्राम भन्दा कम भयो भने चुनौतिपूर्ण हुने पनि उनले वताए । जुम्ल्याहा वच्चाहरुको तौल क्रमशः १ किलो २५ ग्राम र १ किलो २ सय ५० ग्राम रहेको छ ।
“उनीहरुको उपचार राम्रोसँग उपचार भइरहेको छ।सुत्केरी महिलाको आफन्त कोही नभएको र श्रीमानले पनि वास्ता नगरेपछि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको पहलमा अस्पताल पुर्याइएको थियो ।
केही समय अगाडि भारतबाट आएकाले उनलाई क्वारेन्टाइनमा राखिको थियो । “ उनले कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ ” जनस्वास्थ्य शाखाका प्रमुख ओमप्रकाश न्यौपानले जानकारी दिए ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १३ फूलवारी निवासी ४० वर्षीया अनिता यादवले शुक्रबार राति सवा नौ बजेतिर जुम्ल्याहा सन्तानको जन्म दिएकी हुन्। उनीको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा उनको नर्मल डेलिभरी भएको हो।
राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा एनआइसियू सेवा उपलब्ध नभएको हुँदा निजी हस्पिटलमा उनीहरूलाई लैजानु परेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य महाशाखाका निरीक्षक विमल केसीले जानकारी दिए।
केसीका अनुसार तुलसी बाल हस्पिटलका सञ्चालक डा. किशोर खत्रीले उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्ने भएका छन्।
डा.खत्रीका अनुसार अहिले महिलाको ब्लड कम भएर रगत चढाइराखेको र दुबै बच्चाको अबस्था पनि जटिल भएकाले आइसियूमा राखेर अक्सिजन दिएर उपचार भइराखेको पनि बताए।
उपमहानगरपालिकाले खानामा लाग्ने खर्च व्यहोर्ने भएको छ। परिवारका सदस्यलाई खानापिनको व्यवस्था र सुत्केरी महिलालाई आवश्यक परेको ब्लडको व्यवस्थापन समेत उपमहानगरपालिकाले व्यवस्थापन गरेको तुलसीपुरका कोरोना फोकल पर्सन केसीले जानकारी दिए।
‘झन्डै दुई हप्ताजति उनीहरूलाई भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ’, डा. खत्रीले भने। महिला र उहाँको श्रीमानको र्‍यापिड टेष्ट नेगेटिभ आएको थियो र अझ उहाँको पिसिआर स्वाब परिक्षण पनि राप्ती अस्पताल बिज्ञान प्रतिष्ठानमा भइराखेको डा.खत्रीले बताए।
जंगल र पहाडमा एक्लै हिँडेर आइन् अनिता
अनिता यादव चार दिन जति पैदल हिँडेरै दुई दिन अगाडि वैशाख २५ गते तुलसीपुरको फूलवारीस्थित घर आएकी थिइन्। उनी ४/५ महिना अगाडि जिल्लाको राजपुर गाउँपालिकाको भौका नाकास्थित माइतीमा गएकी थिइन्।
भौका नाका नेपाल– भारत सीमा क्षेत्र हो। त्यहाँ यातायातको सुविधा छैन। जंगलै जंगलको पैदल यात्रा गर्नु पर्छ। गर्भवती यादव एक्लै र भोकभोकै तीन–चार दिन लगाएर सुत्केरी हुन फूलबारीस्थित घर आएकी थिइन्। साथमा आफूलाई आवश्यक पर्ने कपडाको पोको पनि सँगै बोकेर आएकी थिइन्।
पहाड र जंगलको कठिन यात्रा गर्दै फूलबारीस्थित घर आइपुगेकी अनितालाई घर परिवारले भने घरभित्रै प्रवेश गर्न दिएनन्। अनितालाई छिमेकी देश भारतबाट आएको भन्ने आरोप लगाइयो।
कोभिड–१९ कोराना भाइरसको त्रासकै कारण घर परिवारले उनलाई घरभित्रै प्रवेश गर्न दिएनन्।
गाउँलेहरूले पनि इन्डियाबाट आएकी भनेपछि झस्किए।
अनिताका पति २४ सै घन्टा मदिरा सेवन गर्छन्। गर्भवती महिला इण्डियाबाट हिँडेरै आएको भन्ने खबर स्थानीयले प्रहरीमा गरेर खबर तुलसीपुर उपमहनगरपालिकामा पुग्यो। गाडी लगेर अनितालाई बिहीबार बेलुकी ५ बजेतिर फूलबारीबाट तुलसीपुर–४ स्थित रक्षाचौर माविको क्वारेन्टिनमा लगेर राखियो।
त्यहाँ बसेको दोस्रो दिन शुक्रबार बिहान अनितालाई व्यथाले च्याप्न थाल्यो। हतार हतार अनिताको आरडिटी टेष्ट गरियो। परिणाम नेगेटिभ देखियो। त्यसपछि उनलाई क्वारेन्टिनबाट तुलसीपुरस्थित प्रादेशिक अस्पताल बिहान ११ बजेतिर ल्याइयो। अवस्था जटिल हुन सक्ने भन्दै बाहिरी जिल्ला लैजाने तयारी गर्न मेयर घनश्याम पाण्डले निर्देशन दिइसकेका थिए। तर, अनिताको नर्मल डेलिभरी भयो।
‘अनिताको रगतमा हेमोग्लोबिनको मात्रा कम देखिएको छ। उनको शरीर र हातखुट्टा पनि सुन्निएको अवस्था छ,’ उपचारमा सम्लग्न चिकित्सकले भने, ‘केही खानेकुरा नखाई भोकभोकै तीन चार दिन पैदल हिँडेको कारण उहाँ निकै कमजोर हुनुहुन्छ।’ अनिताका यसअघि नै दुई छोरा र दुई छोरी रहेका छन्।
Tags: Corona Virus #Covid19Tulsipur hospital